1954-1964 Evinrude 5.5 HP က Tune-UP Project မှစက်နှိုးစနစ် Tune-Up ကို | ပဲ့ချိတ်လှေမော်တော်ပြုပြင်ခြင်း
1954-1964 Evinrude 5.5 HP က Tune-UP Project မှစက်နှိုးစနစ် Tune-Up ကို
မီးပွားပလပ်နဲ့ပလပ်ဝါယာကြိုးများ၏ချွင်းချက်နှင့်အတူစက်နှိုးစနစ်၏အပေါငျးတို့သ flywheel အောက်တွင်တည်ရှိသည်။ အမျိုးအစား magneto ဒီမော်တာအပေါ်စက်နှိုးနေသည် တနေ့အမှတ်နှင့်အတူ magneto Flywheel။ OMC အတူတူပင်အသုံးပြုခဲ့ universal magneto အဆိုပါ 50 ရဲ့တက်ကနေသူတို့ရဲ့သေးငယ်တဲ့ပဲ့ချိတ်အများစုအပေါ်မကြာသေးမီကသူတို့အီလက်ထရောနစ်စက်နှိုးသုံးပြီးစတင်သောအခါအအထိပါပဲ။ ၏အလုပ် စက်နှိုးစနစ်က လုံလောက်အောင်ထုတ်လုပ်ရန်ဖြစ်ပါသည် ဗို့အား အဆိုပါခုန်ဖို့ (20,000 န်းကျင် volts) အပေါက် ထိုအပေါ် ပလပ်ဖြစ်နိုင်ဟု, တစ်ဦးမီးပွားဖန်တီးခြင်းနှင့်လောင်စာ / လေထုအရောအနှောစတငျခဲ့သညျနှင့်ဗို့အားအတိအကျညာဘက်အချိန်ကိုက်နှင့်အတူမီးပွား plug ကိုပေးပို့ကြောင်းသေချာစေရန်။
အဆိုပါ Flywheel Nut Remove - အဆိုပါ flywheel ခွံမာသီးလျှော့ပေးရေး။ တစ်ဦး3/4လက်မ socket သို့မဟုတ်အခြားလိမ်ဖဲ့ခြင်းအသုံးပြုခြင်းသည် flywheel ခွံမာသီးလျှော့ပေးရေး။ သငျသညျကခွံမာသီးနှင့်အတူလှည့်မည်မဟုတ်ဒါကြောင့်သင် flywheel ကိုင်ပြီးနေစဉ်ခွံမာသီးမှလိမ်အားလျှောက်ထားနိုင်ပါသည်နိုင်အောင် flywheel စာရေးကိရိယာကိုင်ဖို့တစ်ခုခုလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီမှာအထူး tools တွေကိုဒီကားငါကိုအသုံးပြု သိုင်းကြိုးလိမ်ဖဲ့ခြင်း ကြောင်းတစ်စုံတစ်ဦးကစုံတွဲတစ်တွဲလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းခရစ်စမတ်အဘို့အကြှနျုပျကိုအပ်ပေးတော်မူ၏။ အဆိုပါပစ္စတင်ကိုသင်ခွံမာသီးကိုဖယ်ရှားနိုင်အောင်အရပ်ဌာန၌ flywheel ကိုင်ပြီးထို့ကြောင့်ထိပ်တန်းသေရေးစင်တာမရောက်မီရပ်တန့်ပါလိမ့်မည်ဒါကြောင့်တစ်ခါတစ်ရံလူများကမီးပွားပလပ်တွင်း၌ကြိုးတစ်ဖဲ့ကိုရခြင်းကပ်ပါလိမ့်မယ်ဘယ်မှာငါကိုဖတ်ပါတယ်။ ငါဒီကိုဆက်သွယ်ချောင်းတွေအပေါ်အလွန်အကျွံဖိအားပေးနေဖြင့်ပြည်တွင်းအင်ဂျင်ကိုပျက်စီးစေခြင်းငှါ, ယုံကြည်ကြသည်။ ဒါ့အပြင်ငါကြိုးဆလင်ဒါထဲမှာကြိုးတစ်ဖဲ့ကိုရခြင်းထွက်ခွာပယ်ဖြတ်ဖြစ်လာနိုင်သည်ဟုဆွေးနွေးမှုပျဉ်ပြားပေါ်မှာဖတ်ပါတယ်
Flywheel Nut လျှော့ပေးရေး
တစ်စိတ်တစ်ဒေသတွင် Flywheel Nut Leave
.အဆိုပါ Flywheel Remove - သင်ရှိသည် tools များပေါ် မူတည်. အဆိုပါ flywheel ဖယ်ရှားပစ်ရန်နည်းလမ်းနှစ်ခုရှိပါတယ်။ အများစုမှာစက်ပြင်သင်တစ်ဦးကိုအသုံးပြုဖို့အကြံပြုပါလိမ့်မယ် flywheel puller ။ သင်သည်သင်၏ဒေသခံ tool ကိုအငှားဆိုင်ကနေစတီယာရင်ဘီး puller ငှားရမ်းနိုင်သည်သို့မဟုတ်သင်တစ်ဦးဝယ်နိုင် သဟဇာတ Balance ။ တစ်ဦး puller သုံးပြီး flywheel ကွေးသို့မဟုတ် warping ကာကွယ်တားဆီးဖို့အလုံခြုံဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ သင်ကဖယ်ရှားပစ်ရန် flywheel အတွက်သုံးတုံးတွင်းပူးတွဲတစ် puller ချင်တယ်။ အဆိုပါ flywheel ၏အပြင်ဘက်အစွန်းပေါ်မှာရပ်လာခဲ့တဲ့ puller မသုံးပါနဲ့။
လက်ကိုင်ပေါ်ပြန် Flywheel Nut ထားပါ
အဆိုပါ flywheel ဆွဲထုတ်ဖို့အခြားပိုမိုလယ်ကွင်းမည်မျှပင်လမ်းရိုးရှင်းစွာပြုလုပ်အနည်းငယ်လက်ကိုင်အထက်တွင်ရှိရာရန် flywheel ခွံမာသီးလျှော့ပေးရေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ကြီးမားတဲ့ပြားချပ်ချပ်ခေါင်းကိုဝက်အူလှည့နှင့်ပျော့ပျောင်းသောတူနှင့်အတူ, ပေါ့ပေါ့တန်တန်ကိုအသာပုတ် အဆိုပါဝက်အူလှည့အတူ flywheel ၏အောက်ခြေအစွန်းအပေါ်အထက်သို့ prying နေစဉ် flywheel ခွံမာသီးပေါ်အောက်ဖက်။ သင်ကစာရေးကိရိယာကြောင်းအစိတ်အပိုင်းတစ်ခု spins နှင့်မသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာသေချာအောင်အားဖြင့် flywheel သူ့ဟာသူအပေါ်အထက်သို့ prying နေကြသည်သေချာအောင်လုပ်ပါ။ အဆိုပါ flywheel 1 Turn / ဖွင့်နှင့်အသာပုတ်ပါနောက်တဖန်နှင့် flywheel ချောင်သည်အထိပြန်လုပ်4။ အဆိုပါ flywheel အနည်းငယ်ဘုံဘိုင်ပြီးနောက်ချောင်လာသင့်တယ်နှင့် flywheel ခွံမာသီးကိုဖယ်ရှားပြီးနောက်လက်ကိုင်ချွတ်ရုပ်သိမ်းနိုင်ပါသည်။ ဒီနည်းလမ်းကိုအတွက်အန္တရာယ်သင်တူနှင့်အတူခက်လွန်းကိုအသာပုတ်ပါလျှင်သင်လက်ကိုင်ကိုချိုးဖျက်နိုင်ခဲ့သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ပါဝင်ပါသည်သော flywheel အောက်တွင်တည်ရှိစက်နှိုးအစိတ်အပိုင်းများ မှတ်, ငွေ့ရည်ဖွဲ့နှင့်ကွိုင်နှစ်ခု တစ်ဦးချင်းစီ၏ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နှစ်ခုဆလင်ဒါရှိပါသည်။ အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှအဲဒီအစိတ်အပိုင်းများကိုဆိုးရွားများနှင့်အစားထိုးလိုအပ်ပါတယ်။ အဆိုပါကွိုင် Wind ဖုံးသော epoxy လုံးဝအက်ကြောင်းအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောသင်ကပုံတစ်ပုံကိုမြင်နိုင်ပါသည်။ ဒီအဟောင်းများကို OMC မော်တာနှင့်အတူတစ်ဘုံပြဿနာဖြစ်ပါတယ်။ အစားထိုးခြင်းမရှိဘဲ, အင်ဂျင်န်းကျင်မဆိုအစိုဓာတ်ကိုသင့်ရဲ့ပုမော်တာအထူးသဖြင့်မြန်နှုန်းမြင့်မှာကောင်းမွန်စွာပြေးပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်အကောင်းတစ်ဦးမီးပွားရဖို့မဟုတ်ပလပ်ကမီးပွားချရန်စေမည်ဖြစ်သောကိုကျော်တိုတောင်းသောသို့မဟုတ်ကို arc ရန်ကွိုင်ဖြစ်ပေါ်စေပါလိမ့်မယ်။ ဖြစ်ကောင်းယနေ့တည်ရှိနေသောထိုမော်တာ၏9ထဲက 10 အောက်တွင်ပြသူတွေကိုကဲ့သို့တူညီသောအခြေအနေကွိုင်ရှိသည်။ ဤပြဿနာကိုရှိသည်မဟုတ်မည်ကိုတစ်ဦးကွဲပြားခြားနား epoxy sealer ရှိသည်ကြောင့်နယူးကွိုင်မူရင်း OEM ထက်သာလွန်ဖြစ်ကြသည်။ အသစ် မှတ်, ငွေ့ရည်ဖွဲ့နှင့်ကွိုင် ဝေးသာလွန်အရည်အသွေးကိုဖြစ်ကြောင်းနှင့်မူရင်းကြောင်းဖျော်ဖြေ။ အဆိုပါအစိတ်အပိုင်းများကိုကျယ်ပြန့်မရရှိနိုင်ပါနှင့်မျှမျှတတစျေးသိပ်မကြီးတဲ့ဖြစ်ကြသည်။
ဟောငျး coil Remove - တစ်ခုချင်းစီကိုကွိုင်တဦးတည်း Phillips နှစ်ယောက်ဖြောင့်ခေါင်းကို screw နှစ်ခုတို့ကအရပျ၌ကငျြးပခဲ့သည်။ သူတို့ပျက်စီးသွားသောဖြစ်လာကြဘူးဒါကြောင့်ထိုအ screw နှစ်ခုအပေါ်သင့်လျော်သောအရွယ်အစားဝက်အူလှည့သုံးစွဲဖို့သေချာပါစေ။ အဆိုပါ screw နှစ်ခုဖယ်ရှားကြသည်နှင့်တပြိုင်နက်, အစိမ်းရောင်နှင့်အနက်ရောင်မူလတန်းဝါယာကြိုးများရပ်ဆိုင်းခြင်းများနှင့်မီးပွား plug ကိုဝါယာကြိုးချွတ်လိမ်။
ဟောငျး Cracked coil
ဟောငျးအမှတ်နဲ့ငွေ့ရည်ဖွဲ့ Remove - ထို rocker ပို့စ်ရဲ့ထိပ်မှာဆက်လက်ထိန်းသိမ်းရန်ကလစ်ဖယ်ရှားပါ။ ဗီဒီယိုကလစ်ကိုဖယ်ရှားနေသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်, သင်ကတက်ဆွဲအားဖြင့်ရမှတ်များ moveable တစ်ဝက်ကိုဖယ်ရှားခြင်းနှင့် rocker post ကိုချွတ်နိုင်ပါတယ်။
ထို့နောက်အမှတ် non-moveable ထက်ဝက်ဖယ်ရှားလိုက်ပါ။ အဆိုပါညှိဝက်အူမဖယ်ရှားပါနဲ့။ အဆိုပါညှိဝက်အူအဆိုပါ stator ပန်းကန်ရန်အချက်များပူးတွဲမဖယ်ရှားမပေးသင့်ပါဘူး။ ပြုပြင်ဝက်အူဟာလက်ကိုင်ကနေသေးငယ်နှင့်အဝေးဆုံးနှင့်ရမှတ်တစ်ခု elongated အ slot ကအတွင်းကိုက်ညီသောဝက်အူဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါအချက်များကို၏အခြေစိုက်စခန်းချရရှိထားသူသောဝက်အူဝက်အူဖြုတ်။ ဒါကလက်ကိုင်အနီးဆုံးတွင်တည်ရှိသောသောဝက်အူဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါအချက်များမှပူးတွဲပါသောကွိုင်နှင့် condenser ဝါယာကြိုးဝက်အူဖြုတ်ခြင်းနှင့်ဖယ်ရှားလိုက်ပါ။ သငျသညျကိုလညျး condenser ဖယ်ရှားပစ်လိမ့်မည်။
အဆိုပါ Stator အခြေစိုက် Remove နှင့်ရှင်းလင်း - carburetor သန့်စင်အသုံးပြုခြင်းသည် stator အခြေစိုက်စခန်းချလေပေါ်မှာနှင့်အထည်နှင့်အတူသန့်ရှင်းတဲ့သုတ်။ သငျသညျလေကြောင်း compressed ကြလျှင်, မည်သည့်ကျန်ရှိနေသောမွမှေုနျ့နှငျ့ carburetor သန့်စင်ပယ်မှုတ်။
အဆက်ဖြုတ် Timing ကြိုတင်
အခုဆိုရင်သင့်ကွိုင်, အချက်များနှင့်ငွေ့ရည်ဖွဲ့ဖယ်ရှားနှင့်သင့် stator အခြေစိုက်စခန်းဖွင့်သန့်စင်ရှိသည်, သင်အသစ်အစိတျအပိုငျးမြားနှငျ့စက်နှိုးစနစ်က reassemble ဖို့အဆင်သင့်ရှိပါတယ်။
, Install သတ်မှတ်မည်, နှင့်နယူးအမှတ်စုံစမ်း - သင်သည်သင်၏မော်တာကောင်းစွာ run ချင်လျှင်, သင့်အချက်များ, installed ထား. , သူတို့တိကျစွာညာဘက်အချိန်တွင်ဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်နီးစပ်ကြောင်းသေချာစေရန်စုံစမ်းစေရပါမည်။ သင့်ရဲ့မီးပွားပလပ်ပစ်ခတ်ကြလိမ့်မည်သည့်အခါဤအသင့်ရဲ့ဆလင်ဒါအတွင်းလောင်ကျွမ်းပယ် setting, ဆုံးဖြတ်သည်။ သင်သည်သင်၏မှတ်စုံတွဲတစ်တွဲကိုစမ်းသပ်ခဲနှင့်တစ်ဦးအုမ်းမီတာသူတို့နှင့်အတူစမ်းသပ်နေဖြင့်မှန်မှန်ကန်ကန်သတ်မှတ်ထားကြသည်အတိအကျသည့်အခါပြောပြနိုင်ပါလိမ့်မည်။
Stator အခြေစိုက်စခန်းမှတဆင့်စမ်းသပ်ခဲ Feed
စမ်းသပ်များထဲမှအဆုံးလာမယ့်သင့်ရဲ့မီးပွား plug ကိုဝါယာကြိုးများ၏တဦးတည်းဖို့ stator အခြေစိုက်စခန်း၏အောက်ဆုံးမှတဆင့်တက်ဦးဆောင်လမ်းပြ Feed ။ ဤစမ်းသပ်ချက်အတွက်အသုံးပြုမည်ဖြစ်ပြီးအဆိုပါအချက်များချိန်ညှိခြင်းနှင့်စမ်းသပ်ပြီးဖြစ်ကြောင်းပြီးနောက်ဖယ်ရှားပါလိမ့်မည်။ စမ်းသပ်များထဲမှအဆုံးလာမယ့်သင့်ရဲ့မီးပွား plug ကိုဝါယာကြိုးများ၏တဦးတည်းဖို့ stator အခြေစိုက်စခန်း၏အောက်ဆုံးမှတဆင့်တက်ဦးဆောင်လမ်းပြ Feed ။ ဤစမ်းသပ်ချက်အတွက်အသုံးပြုမည်ဖြစ်ပြီးအဆိုပါအချက်များချိန်ညှိခြင်းနှင့်စမ်းသပ်ပြီးဖြစ်ကြောင်းပြီးနောက်ဖယ်ရှားပါလိမ့်မည်။
တနေ့ပွိုင့်အခြေစိုက် Down ဝက်အူ
သင့်ရဲ့စက်နှိုးညှိတက်ကိရိယာအစုံအတွက်ပေးအမဲဆီနှင့်အတူနှစ်ဦးစလုံး rocker ပို့စ်များကိုချောဆီ။ အဆိုပါ rocker ရေးသားချက်များအပေါ်အမဲဆီသာပါးလွှာသောအင်္ကျီကိုဝတ်ရန်သေချာစေပါ။ သင့်ရဲ့လက်ချောင်းပေါ်သို့အချက်များနှင့်အတူပေးထားသောအမဲဆီ၏သေးငယ်တဲ့ငွေပမာဏကိုအားမရနှင့်လက်ကိုင်လှည့်နေစဉ် cam ပေါ်ကိုသေးငယ်တဲ့အပေါ်ယံပိုင်းပွတ်တိုက်ခြင်းဖြင့်အတူ cam ချောဆီ။ ဒီမော်တာအပေါ်လက်ကိုင်ကိုဖွင့်ဖို့တစျခုမှာလွယ်ကူသောလမ်းရိုးရှင်းစွာတဦးတည်းလက်နှင့်အတူဆင်းရောက်ရှိရန်နှင့်ပန်ကာကိုဖွင့်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ချေပဝက်အူကိုကျော်သူကအားမရခြင်းနှင့်သင် mounting ဝက်အူကိုထည့်သွင်းနိုင်အောင်ပြုလုပ်တည်နေရာအားဖြင့် armature အခြေစိုက်စခန်းပေါ်သို့မှတ်ထား၏ Non- ရွှေ့ပြောင်းခြမ်းထားပါ။ အဆိုပါ mounting ဝက်အူနဲ့သော့ခတ်အဝတ်လျှော် Install လုပ်ပါ။ အနေအထားသို့မဏ္ဍိုင် post ကိုနှင့်စာနယ်ဇင်းကျော်သတ်မှတ်ထားသစ်ကိုမှတ်များ၏ moveable ခြမ်းထားပါ။ သင်ကသတ္တုပြားအပိုင်းအစအတွင်းပိုင်း fit ပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်နွေဦးချုံ့ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ ယင်းမဏ္ဍိုင်ပို့စ်ပေါ်သို့ထိန်းကလစ်ချထားပါကလက်ကိုင်ပယ်ဖွင့်လှစ်ကြောင်းဒါကြောင့်အရှေ့တိုင်း။ နွေဦးကျော်နွေဦးကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းရန်ကလစ်နဲ့နွေဦးတင်းမာမှုရရှိထားသူကြောင်းသတ္တုပြားအပိုင်းအစချထားပါ။ ကရမှတ်၏ဖွင့်ပွဲနှင့်အတူဝင်ရောက်စွက်ဖက်မည်မဟုတ်ဒါကြောင့်ဒီကလစ်၏အောက်ဆုံးအပေါ်အသွင်သည့်အနိုင်အထက်လက်မောင်းကနေဝေးထောက်ပြသည်သေချာအောင်လုပ်ပါ။
Molly နှင့်အတူအမဲဆီလက်ကိုင် Cam
စက်နှိုးတနေ့ပွိုင့် Cam ထိပ်တန်းနေရာထားရှိ
ပိတ်ပင်တားဆီးမှုပွတ်တိုက်သည့်အနိုင်အထက်လက် cam ၏မြင့်အချက်ပေါ်ကြောင်းဒါလက်ကိုင်ပါ။ အဆိုပါ cam ပေါ်တွင်အမြင့်ဆုံးအမှတ်ကိုနှုတ်ကပတ်တရားတော်ကိုမြင့်အမှတ်တည်နေရာမှာတံဆိပ်ထု "TOP" ရှိပါတယ်။ တစ်ဦး feeler gauge အသုံးပြုခြင်း, ချေပဝက်အူလှည့်ခြင်းဖြင့် .020 လက်မမှကွာဟချက်ကိုထိန်းညှိ။ အဆိုပါ feeler gage .020 ဓါး snugly နှစ်ခုအဆက်အသွယ်အချက်များအကြား fit နိုင်ဖြစ်သင့်သည်။ အတိအကျ 020 ကွာဟမှုရတဲ့အလွန်အကျွံအချိန်ဖြုန်းဖို့မလိုအပ်ရှိပါသည်။ ဤသည် .020 ကွာဟမှုရိုးရှင်းစွာသင်အောက်ကလုပ်ထုံးလုပ်နည်းထဲမှာမြင်ရပါလိမ့်မည်အဖြစ်ကနေထိန်းညှိဖို့ရာမှတစ်ဦးစမှတ်ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါကွိုင်နှင့် condenser ဝါယာကြိုးအချက်များမှလွဲချော်သွားတာပါလိမ့်မည်ရှိရာတည်နေရာရန်သင့်စမ်းသပ်ခဲတစျခုအဆုံး clip ။
အမြင့်ပွိုင့်မှလက်ကိုင် Cam Turn
စက်နှိုးတနေ့ပွိုင့်ဖို့ clip စမ်းသပ်ခဲ
စက်နှိုးအချိန်ကိုက်စမ်းသပ်ဖို့ရိုးရှင်းတဲ့ပေမယ့်ထိရောက်တဲ့နည်းလမ်း: သင်သည်သင်၏အနိုင်အထက်အချက်များကိုစစ်ဆေးတစ် strobing အလင်းဒါမှမဟုတ်စျေးကြီးစက်နှိုး Analyzer ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးလျှင်, စတိုးဆိုင်မှထွက်အလျင်စလိုနဲ့တစျခုကိုဝယ်ခြင်းငှါအဘယ်သူမျှမလိုအပ်လည်းမရှိ။ သင်သည်သင်၏စက်နှိုးအချိန်ကိုက်စမ်းသပ်ဖို့လိုအပ်သမျှနှစ်ခုမိကျောင်းစမ်းသပ်ခဲနှင့်ဆက်လက်စစ်ဆေးဘုံအုမ်းမီတာဖြစ်ပါတယ်။ အားလုံးသင့်ရဲ့စက်နှိုးအစိတ်အပိုင်းများကိုအသစ်သောကြောင့်တစ်စက်နှိုး Analyzer သုံးစွဲဖို့မလိုအပ်ရှိပါသည်။ ဤနည်းလမ်းကိုသင်ပိုပြီးစျေးကြီးစမ်းသပ်မှုကိရိယာများနှင့်အတူနည်းတူတိကျစွာသင်သည်တတ်နိုင်အဖြစ်သင့်စက်နှိုးအချိန်ကိုက်ထိန်းညှိဖို့ခွင့်ပြုပါလိမ့်မယ်။ စက်နှိုးအချိန်ကိုက်အားလုံးသင့်ရဲ့အနိုင်အထက်အချက်များကိုဖွင့်လှစ်နှင့်လက်ျာအချိန်တွင်ပိတ်ပြီးသေချာအောင်အကြောင်းပါ။ အဆိုပါ flywheel နှင့်ဝန်ဆောင်မှုလက်စွဲ၏ထိပ်ပေါ်မှာတံဆိပ်ထုညွှန်ကြားချက်ရိုးရှင်းစွာလက်မ .030 ရန်သင့်ရမှတ်ကွာဟမှုဟုပြောကြလော့။ ဤသည်သာတစ်ဦးအကြမ်းဖျင်းဖြစ်ပြီးသို့မဟုတ်မ may သင့်ရဲ့စက်နှိုးအချိန်ကိုက်မှန်ကန်သောဖြစ်ခြင်းကိုဖြစ်စေနိုင်တယ်။ သငျသညျကိုအောကျတှငျဖျောပွထားသောနည်းလမ်းကိုသုံးပါလိမ့်မယ်လျှင်, သင်၏အချိန်ကိုက်အတိအကျဖွစျလိမျ့မညျနှင့်အဆုံးရလဒ်ကသင်၏မော်တာကိုပိုမိုချောချောမွေ့မွေ့ပြေးလွယ်ကူစတင်ပါလိမ့်မည်ကြောင်းဖြစ်လိမ့်မည်။
အဆိုပါ flywheel ခွံမာသီးကိုဖယ်ရှားရန်နှင့်ယာယီပြန်လက်ကိုင်ပေါ်သို့ flywheel အစားထိုးလိုက်ပါ။ အဆိုပါ flywheel ၏ဗဟိုအတွက် slot ကအဆိုပါ flywheel သော့ချက်နှင့် flywheel အနေအထားသို့သော့ခတ်နေသည်ကျော်ကိုက်ညီသောသေချာပါစေ။ ကတင်းကျပ်မရှိဘဲ flywheel ခွံမာသီးအစားထိုးလိုက်ပါ။ အဆိုပါ flywheel က၎င်း၏အခြေစိုက်စခန်းမှာထစ်အခြိနျဇယားသိရသည်။ အဆိုပါ flywheel ၏ဆန့်ကျင်ဘက်နှစ်ဖက်ပေါ်နှစ်ခုထစ်, အချက်တွေကိုတစ်ခုချင်းစီထားဘို့တရှိပါတယ်။ အဆိုပါပိုကြီးထစ်ဆလင်ဒါနံပါတ်တစ်အဘို့ဖြစ်လိမ့်မည်နှင့်ဆန့်ကျင်ဘက်အခြမ်းအပေါ်သေးငယ်ထစ်ဆလင်ဒါနံပါတ်တစ်နှစ်ခုအဘို့ဖြစ်၏။ ကလောင် marking တစ် Sharpie ယူ. သူတို့ကအလွယ်တကူမြင်နိုင်ပါလိမ့်မည်ဒါသည်ဤအမှတ်အသားများကိုမီးမောင်းထိုးပြ။
Flywheel Timing, Mark
စက်နှိုး Timing စမ်းသပ်ခြင်း
သင့်ရဲ့အုမ်းမီတာပေါ်တွင်ဆောင်တစ်ဦးရန်သင့်စမ်းသပ်ခဲ၏ချောင်အဆုံးချိတ်ဆက်ပါ။ အခြားစမ်းသပ်မှုခဲနှင့်အတူမြေဖို့သင့် ohmmeter ၏အခြားခဲချိတ်ဆက်ပါ။ သင်သည်သင်၏ flywheel လက်ယာရစ်လှည့်အဖြစ်က armature အခြေစိုက်စခန်းအပေါ်နှစ်ခုအမှတ်အသားများနီးလာသည်အတိုင်း, အချိန်ကိုက်အမှတ်အသားကိုကြည့်ပါ။ သင် flywheel လှည့်အတိုင်း flywheel ပေါ်တွင်အမှတ်အသား left မှလက်ျာဘက်ကနေပြောင်းရွှေ့ထားရမည်။ အဆိုပါ flywheel ပေါ်တွင်အချိန်ကိုက်အမှတ်အသားဟာ armature ပန်းကန်ပေါ်နှစ်ခုအမှတ်အသားများအကြားဖြစ်တဲ့အခါ, အချက်များကိုဖွင့်သင့်တယ်နှင့်အုမ်းမီတာအဆုံးမဲ့ ohms မှ0ကနေပြောင်းလဲသွားပါလိမ့်မယ်။ magneto စက်နှိုးဤအမျိုးအစားမှာမီးပွားပလပ်အချက်များပွင့်လင်းအဖြစ်ပစ်ခတ်ပါလိမ့်မယ်။
အဆိုပါအချက်များအတွက်ကွာဟမှုများလွန်းသေးငယ်သည်မှန်လျှင်, အမှတ်နှောင်းပိုင်းတွင်ဖွင့်လှစ်ခြင်းသို့မဟုတ်အချိန်ကိုက်အမှတ်အသားဟာ armature အခြေစိုက်စခန်းအပေါ်အမှတ်ဖြတ်သန်းပြီးနောက်ပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါအချက်များအတွက်ကွာဟမှုသိပ်ကျယ်ပြန့်သည်မှန်လျှင်, ထိုအချက်များကိုအစောပိုင်းဖွင့်လှစ်ပါလိမ့်မယ်ဒါမှမဟုတ်အချိန်ကိုက်အမှတ်အသားဟာ armature အခြေစိုက်စခန်းအပေါ်အမှတ်အသားများရောက်ရှိမီ။ ဤသည်မော်တာသင်မှတ်အတွက်ကွာဟမှုဖွင့်လှစ်သို့မဟုတ်ပိတ်ဖို့ရန်ကွာဟချက်ညှိနှိုင်းမှု screw နှစ်ခုဖယ်ရှားရယူနိုငျသော flywheel ၏ထိပ်၌သေးငယ်တဲ့သတ္တုအဖုံးရှိတယ်။ သင်အချိန်ကိုက်အမှတ်အသားဟာ armature အခြေစိုက်စခန်းအပေါ်နှစ်ခုအမှတ်အသားများအကြားအခါဖွင့်ရန်အချက်များအရသည်အထိကွာဟမှုညှိနှိုင်းမှုဝက်အူမှသေးငယ်တဲ့ချိန်ညှိထားပါ။
အခုတော့ install လုပ် ထား. , မှတ်၏ဒုတိယ set ကိုစမ်းသပ်ရန်, ဤအချိန် မှလွဲ. သင် flywheel ၏ဆန့်ကျင်ဘက်ဘက်မှာသေးငယ်တဲ့အချိန်ကိုက်အမှတ်အသားကိုအသုံးပြုဖို့ပါလိမ့်မယ်။ ဒါ့အပြင်သင်အနိုင်အထက်မှတ်၏ပထမ set ကိုပြုသောထို cam ၏ချောဆီအရည်ကြည်များနှင့် rocker post ကိုကျော်သွားနိုင်ပါတယ်။
သစ် coil စမ်းသပ်ရန် - သငျသညျဝယ်သစ်ကိုကွိုင်ကောင်းသောဖြစ်ကြသည်ဟုမယူဆပါနဲ့။ တစ်ဦး Ohmmeter တစ်ခုသို့မဟုတ်အသုံးပြုခြင်း diode, ဆက်ဖြစ်နေ Checker အဆိုပါကွိုင်၏မူလတန်း Wind ၏ဆက်လက်စမ်းသပ်။ အဆိုပါအကြားဆက်လက်ရှိသင့်ပါသည် စိမ်းလန်းသော နှင့် Black က ဆောင်။ အဆိုပါအကြား .9 အုမ်းခုခံအကြောင်းကိုရှိသင့်ပါသည် စိမ်းလန်းသော နှင့် Black က ဆောင်။
စက်နှိုး coil မူလတန်း Wind Check
စက်နှိုးကွိုင်က Secondary Wind Check
နယူး coil Install နှင့်ငွေ့ရည်ဖွဲ့
အဆိုပါမီးပွား plug ကို connector ကိုများအတွက်တွင်း၌ဆီလီကွန်ဒြပ်ပေါင်းများ၏သေးငယ်တဲ့ငွေပမာဏကိုထားပါ။ ဒါဟာသင့်ရဲ့ရေချိုးကန်တံဆိပ်ခတ်ထားမှအသုံးပြုဆီလီကွန်၏ကြင်နာမဟုတ်ပါဘူး။ ဆီလီကွန် sealer ဒီလိုခိုင်မာစေမထားဘူး။ ဒါဟာသင့်ရဲ့လျှပ်စစ်ဆက်သွယ်မှုထဲကအစိုဓာတ်ကိုစောင့်ရှောက်ဖို့ဆောင်ရွက်ပါသည်။ သင်သည်မည်သည့်ရေဒီယိုလာပြီးအတူတူနေနေကြပါတယ်သို့မဟုတ်အီလက်ထရွန်းနစ်စတိုးဆိုင်မှာဒီဆီလီကွန် sealer ကိုဝယ်လို့ရပါတယ်။ သင့်ရဲ့မီးပွား plug ကိုဝါယာကြိုးပေါ်သို့မီးပွား plug ကိုဝါယာကြိုးဖိနပ်လျောတိုက်။
ကွိုင်အပေါ် Silicon ထား Plug Connectors အစပျိုး
အဆိုပါမီးပွား plug ကိုဝါယာကြိုးတစ် Threaded pin ကိုပေါ်သို့ကြောင့် screwing အားဖြင့်ကွိုင်နဲ့ချိတ်ဆက်နေသည်။ သင် connector ကိုသို့သူတို့ကိုငါဝက်အူဖို့လုံလောက်တဲ့လျှော့ရပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မီးပွား plug ကိုဝါယာကြိုးကိုင်ထားသည့်ဝက်အူလျှော့ပေးရေးဖို့လိုအပ်လိမ့်မည်။ ယင်း၏ connector ကိုစမီးပွား plug ကိုဝက်အူနှင့် connector ကိုကျော် Boot တက်လျှော။ ဒီဆက်သွယ်မှုများအတွက်ကောင်းတစ်ဦးရေစိုခံတံဆိပျပေးသငျ့သညျ။ အဆိုပါဝက်အူတွင်း align လုပ်ဖို့ရာအရပျသို့ကွိုင်လှည့်ပါ။ အဆိုပါ armature ပန်းကန်၏အောက်ဆုံးဘက်ပေါ်မီးပွား plug ကိုဝါယာကြိုးများကိုင်ဆောင်သည့်ဝက်အူတင်းကျပ်။
အဆိုပါကွိုင်၏အနက်ရောင်ဝါယာကြိုးအဝေးဆုံးဝေးရမှတ်ထဲကနေသောကွိုင်အထိုင်ဝက်အူကချိတ်ဆက်ပြီးရပ်နားထားရသည်။ အဆိုပါဓာတ်ပုံများကိုအထက်တွင်ဒီကွိုင်မြေပြင်ဝါယာကြိုးလမ်းကြောင်းမှမှားများနှင့်နည်းမှန်လမ်းမှန်ကိုပြသ။ သငျသညျကိုသူတို့မဆိုရွေ့လျားအစိတ်အပိုင်းများကိုမထိမခိုက်စေမည်ဒါကြောင့်အားလုံးဝါယာကြိုးများသေသပ်စွာဝေးတွေထဲမှာအောင်းနေနိုင်ပါတယ်နေကြသည်သေချာအောင်ချင်တယ်။ ဒီကွိုင်၏အမှု၌ငါ Phillips ကခေါင်းကို mounting ဝက်အူနောက်ကွယ်မှအတွက်အနက်ရောင်ဝါယာကြိုးတွေထဲမှာအောင်းနေနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင်သင်တို့သည်နောက်ဝါယာကြိုးများ pinch get သူတို့ connectors အပေါ်ဖိစီးထားမည်မဟုတ်ဒါကြောင့်သူတို့တစ်တွေနည်းနည်းလျှော့ရှိသည်သေချာစေရန်ချင်တယ်။
သင် mounting screw နှစ်ခုတင်းကျပ်မီကွိုင်သံလိုက်အဆိုပါ armature ၏အခြေစိုက်စခန်းမှာ mounting ပိတ်ပင်တားဆီးမှုအတိတ်တိုးချဲ့တော်မမူကြောင်းသေချာပါစေ။ အဆိုပါကွိုင် positioned ဖြစ်ပါတယ်လျှင်သံလိုက်ဒီအခြေစိုက်စခန်းအတိတ်ကိုတိုးချဲ့နိုင်အောင်, အကွိုင်သံလိုက်အဆိုပါ flywheel ၏အတွင်းပိုင်းမျက်နှာပြင်ကိုထိပါလိမ့်မယ်။
armature အခြေစိုက်စခန်းအသစ် condenser နေရာချ။
အနိုင်အထက်အချက်များမှကွိုင်နှင့် condenser ဝါယာကြိုးဝက်အူ။
ထိထိရောက်ရောက်မအစိမ်းရောင်ကွိုင်ဝါယာကြိုးများနှင့်လည်းရမှတ်ဖို့အနက်ရောင် condenser ဝါယာကြိုးချိတ်ဆက်ပါ။ ကဝက်အူ mounting ရဲ့အတူအခြေစိုက်စခန်းဖို့ condenser mount ။ condenser နှင့်ကွိုင်ဝါယာကြိုးကိုင်ထားသည့်ဝက်အူတင်းကျပ်။ ဒီလုပ်နိုင်တဲ့ရှုပ်ထွေးတက်သင့်ရဲ့ပြုပြင်အချက်များဖြစ်သောကြောင့်မမှတ်ဆန့်ကျင် over-တင်းကျပ်ဒီဝက်အူသို့မဟုတ်တွန်းအားပေးဖို့သတိထားပါ။
နယူး magnedo စက်နှိုးစနစ်။
Flywheel Nut တင်းကျပ်
အဆိုပါ flywheel ကိုအစားထိုးခြင်းနှင့် snugly အဆိုပါ flywheel ခွံမာသီးတင်းကျပ်။ သင်တစ်ဦး torque လိမ်ဖဲ့ခြင်းရှိပါကအကြောင်းကို 45 ခြေလျင်ပေါင်ဖို့ flywheel ခွံမာသီး torque ။
Spark စစ်ဆေးသည် - အဟောင်းကိုမီးပွားပလပ်ဖယ်ရှားပါ။ ဆေးထိုးအပ်-နှာခေါင်းသံနှုတ်တရံအသုံးပြုခြင်း, ဟောင်းမီးပွားပလပ်၏အဆုံးဖြောင့်နှင့်သူတို့၏ဝါယာကြိုးမှအဟောင်းကိုပလပ်ပြန်လည်ချိတ်ဆက်။ မြေပေါ်မှာအဟောင်းကိုမီးပွားပလပ်၏အခြေစိုက်စခန်းကိုင်ပြီးနေစဉ်, လက်ဖြင့်သို့မဟုတ်တစ်လိမ်ဖဲ့ခြင်းနှင့်အတူ flywheel ခွံမာသီးပေါ်လှည့်ခြင်းဖြင့်လည်းကောင်းထို flywheel လက်ယာရစ်လှည့်။ သင်သည်သင်၏ဟောင်းပလပ်များ၏ကွာဟချက်ခုန်ကျန်းမာမီးပွားကြည့်ပါသင့်တယ်။
နယူး Spark ကိုမဆိုဆက်သွယ်ကွာဟမှုများနှင့် Install - တစ်ဦး feeler gauge အသုံးပြုခြင်း, .030 လက်မမှအသစ်ရဲ့မီးပွားပလပ်များ၏ကွာဟချက်ကိုထိန်းညှိ။ အသစ်ပလပ်မှန်ကန်သောကွာဟမှုများနှင့်ကွာဟမှုဟာပလပ်အတူသေတ္တာထဲကလာလိမျ့မညျမဟုမကြာခဏသတိမမူသောရိုးရှင်းသောလုပ်ထုံးလုပ်နည်းဖြစ်ပါတယ်။ သင်မီးပွားပလပ်ကွာဟမှုညှိဘို့အထူး tool ကိုမရှိဘူးဆိုရင်ကွာဟချက်ကယျြဝနျးသို့မဟုတ်ပေါ့ပေါ့ကွာဟချက်ကိုပိတ်ဖို့ရန်ခက်ခဲတစ်ခုခုနှင့်အတူ plug ကို၏အဆုံးကိုအသာပုတ်ရန်ဓါးဓါးကိုသုံးနိုင်သည်။ အသစ်ကမီးပွားပလပ် Install နှင့်သင့်စက်နှိုးစနစ်အညှိတက်သည်။